नेपालमा बढ्दो कोरोना संक्रमण : एक हप्तामै १० हजार सङ्क्रमित – Health Post Nepal
नेपालमा बढ्दो कोरोना संक्रमण : एक हप्तामै १० हजार सङ्क्रमित
२०७८ पुष २९ गते १५:५८
काठमाडौं – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपालमा ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमण दैनिक बढिरहेको हो। ओमिक्रोन भेरियन्ट सङ्क्रामक बढी रहेकोले पनि पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षणमा सङ्क्रमण दर बढेको पाइएको हो।
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू नगर्ने, भीडभाडमा जाने तथा खोप नलगाउने गर्नाले सङ्क्रमण बढिरहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सङ्गीता मिश्राले सङ्क्रमण गत हप्ताको तुलनामा यसहप्ता ९.२ प्रतिशतले बढेको बताइन्। ओमिक्रोन भेरियन्टले सङ्क्रमण एकजनाबाट १० जनामा सार्ने गर्दछ।
सङ्क्रमणको पहिलो लहरले एकजनाबाट अर्को दुईजनालाई तथा दोस्रो लहरमा डेल्टा भाइरसले एकजनाबाट चारदेखि पाँचजनासम्म सङ्क्रमित बढाउने गर्दथ्यो। उनका अनुसार अघिल्लो हप्ताको ४९ हजार ८७७ जनाको पिसिआर परीक्षणमा २ हजार ३० जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यसहप्ता ६२ हजार ७५५ जनाको पिसिआर गरिएकोमा ८ हजार ३७३ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो। यस हप्ता परीक्षण २५.८ प्रतिशतले गरेका छन्।
यसहप्ताको सङ्क्रमण दर १३.३ प्रतिशत छ। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ६.७ प्रतिशतले पछिल्लो हप्ताको तुलनामा यसहप्ता सङ्क्रमण बढेको पाइएको छ। खोप नलगाउने व्यक्तिमा लगाएको भन्दा १० गुणा बढी सङ्क्रमण बढ्छ। यस्तै खोप नलगाएकालाई अस्पतालमा भर्ना भएर गाह्रो भएकालाई ओमिक्रोनले १७ गुणा र मृत्यु हुने सम्भावना पनि २० गुणा बढाउने अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालमा एक हप्तामा १० हजार सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यही पुस २२ गतेदेखि पुस २८ गतेसम्म १० हजार ५८४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पुस २२ गते ५४०, पुस २३ गते ९६८, पुस २४ गते ९४४, पुस २५ गते १ हजार १६७, पुस २६ गते १ हजार ४४६, पुस २७ गते २ हजार ४४४ तथा पुस २८ गते ३ हजार ७५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो।
खोप लगाउनेको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मिश्राका अनुसार गतहप्ताको तुलनामा यस हप्ता दुई प्रतिशतले खोप लगाउने सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। दोस्रो मात्रा लगाउनेमा चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
लक्षितमध्ये अहिलेसम्म ७६.९ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ५७. ६ प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन्। बुधबार २ लाख १४ हजार ५७ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन्। सरकारले लक्षित समुदायलाई यही पुस मसान्तसम्म दुई तिहाईलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। कोरोना भाइरसको खोप बागमती र गण्डकी प्रदेशले लक्ष्य अनुसारको लगाइसकेका छन्। बाँकी प्रदेशले खोप लगाउने कार्यलाई द्रुत बनाएका छन्।
संक्रमण बढेसँगै सबै सर्तक हुनुपर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अझै कडाइका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन्त्रालयले कोही पनि सङ्क्रमण भएको वा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा परेका कम्तीमा पाँच दिन क्वारेन्टिनमा बसेर मात्र परीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ। लक्षण देखिएका व्यक्तिले तुरुन्तै परीक्षण गराउन मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ।